I-Intel Modern Warfare Hack Hack Ukukopa, iAimbot, i-ESP, iWallhack- iGamepron
Intel Umnxeba woXanduva: Imfazwe yangoku yeHack Hack
Nge-Intel Modern Warfare Hack yethu, uqinisekile ukuba ungamandla amakhulu.
Ukuthenga ukufikelela kweyona Call of Duty ilungileyo: I-Modern Warfare Hack iyafumaneka! Thenga isitshixo semveliso yosuku olunye-namhlanje!
Zive ukuba amandla akho afumaneka kuwe ngoku kwiMfazwe yesiqhelo yeMfazwe- Thenga into eyi-1 yeVeki yeMveliso namhlanje!
Abadlali abanezakhono eziphezulu abasengxaki, nokuba ungubani! Thenga isitshixo semveliso yenyanga e-1 namhlanje!
Inye into edlalwa ngabadlali beMfazwe yangoku kukuba "yinkosi yomdlalo". Xa unokuthatha nasiphi na isixhobo kwaye ulutshabalalise ukhuphiswano lwakho ngokulula, abantu baya kukuhlonipha-yiyo loo nto yenza izixhobo zethu zibe
Umnxeba woXanduva: Imfazwe yangoku ye-Intel yolwazi lokuHamba
I-Call of Duty: Imfazwe yanamhlanje yinto entsha kwi-franchise gamers abathandayo abaye bajongisa ishumi leminyaka elidlulileyo okanye njalo. Ngumdlalo omnandi osizisele omnye umntu omangalisayo wokuqala ukudubula, kodwa kuthekani ngabadlali abanobuchule oza kulungelelaniswa nabo? Usenokuhlala ukhuphisana nakwizicwangciso “ezimnandi” ezinokwenzeka, konke omele ukwenze kukufumana ukufikelela kwi-COD MW yeHack yethu emangalisayo! Usebenzisa iMfazwe yethu yaNgoku i-Intel Hack kukunika ukufikelela kwi-Stellar Modern Warfare Aimbot naseWallhack, kunye nezinye izinto ezongezelelweyo.
Le mveliso ifuna i-BIOS MODE SET YAKHO KWI-UEFI KUNYE NEEDISKI ZOKUSETYENZISWA KWI-GPT MODE YOKUSETYENZISWA, isiQinisekiso sokuQiniseka okukhubazekileyo, Ukukhubazeka okukhawulezileyo kweBoot, ukuSebenza okuVumelekileyo.
Asizukuthatha naluphi na uxanduva nakuphi na ukungasebenzi kakuhle okubangelwe ukuba awukufundi oku. Kuqala jonga iimfuno.
Imfazwe yethu yanamhlanje iAimbot kunye neWallhack zinokunceda ngobuninzi, njengoko unokubona zombini iintshaba kunye neqela usebenzisa i-Visual ESP. Kukho iphalethi ye-ESP enemibala, kunye ne-2D Ibhokisi ye-ESP. Imfazwe yethu yanamhlanje yeAimbot inempawu zeSmooth / ezizimeleyo, iiVisibile Checks, nokunye okuninzi.
Utshaba ESP (Amathambo)
Ulwazi loTshaba (Ukufa, iqela, umgama, impilo)
Into ESP enezihluzi.
Iinjongo zohlengahlengiso FOV & Smooth & Distance
I-Triggerbot iqwalaselwe kakuhle
Malunga noMnxeba woXanduva: Imfazwe yangoku ye-Intel
Ayikho enye indlela yokuyibeka, i-COD MW Intel Hack sisisombululo esigqibeleleyo kuye nabani na ofuna ukuphumelela imidlalo emininzi. Nokuba uyagula ngenxa yokuswela i-K / D okanye ufuna nje ukuthwala iqela lakho ukuze uphumelele, usebenzisa iiMfazwe zangoku zeMfazwe zikhohlisa ukuba zikubeke kwindawo ephumeleleyo. Ngawo onke amanqaku esikwazileyo ukuwasebenzisa ngaphakathi kwesi sixhobo, akukho ndlela abachasi bakho abaya kuba nakho ukukunciphisa! Nje ukuba ubhalise kuMthwalo uya kuba nakho ukulandela incwadi ethi "Uyisebenzisa kanjani" kwaye ufake i-hack yakho.
Kutheni usebenzisa ukubiza uxanduva: Imfazwe yangoku yeIntel ngaphezulu kwabanye ababoneleli?
Umgangatho kufuneka ube luphawu olubalulekileyo kuwe njengomsebenzisi, yiyo loo nto abantu abaninzi bezimisele ukubala i-Gamepron kwiimfuno zabo zokukopela. Abantu bayazi ukuba zonke iiMfazwe zethu zanamhlanje azibonakali, ke akukho sidingo sokubeka iakhawunti yakho emngciphekweni ngelixa lokugenca- sikwanikezela ngeempawu ezizodwa ezinokufumaneka apha kwiGamepron. Sifuna okona kulungileyo kubathengi bethu, kwaye ngokungathi oko bekungacacanga ngokwaneleyo, sebenzisa iiHack War War Hacks zethu kwaye uza kuzibonela! Ngobuninzi bezinto onokukhetha kuzo kwaye akukho mxholo ungalunganga, sesona sikhethwa kwi-Intanethi.
Imenyu yomdlalo ongaphakathi komdlalo izakuqhagamshela ngokuthe ngqo kwiFowuni yoXanduva: Imfazwe yangoku ye-Intel Hack ngelixa udlala. Awudingi ukuvala usetyenziso xa ufuna ukwenza utshintsho kwiMihla yokuSingathwa kwemfazwe, imenyu yethu yomdlalo ekuvumela ukuba wenze njalo ngokulula-unokuhlengahlengisa ukuthandwa kwesantya seAimbot, uKhetho lweThagethi, ukuSuswa, njl. Ngelixa ezinye iinkampani ziya kukunyanzela ukuba ulinde de ugqibe umdlalo ukuze wenze utshintsho, siyicwangcisile inkqubo ngokwazisa imenyu yomdlalo! Xa umntu ekubiza ukuba ubiwe, imenyu yethu yomdlalo iya kukunceda uhlale ukhuselekile.
A2. Hayi, awungekhe ushukume ngokukhohlisa kwaye kuya kubonakala kubabukeli.
Ewe, obu buqhetseba buquka i-hwid spoofer yabasebenzisi abavaliweyo.
A6. Inokusetyenziswa kwiscreen esigcweleyo.
Abanye ababoneleli banokuba neempawu ezifanayo, kodwa akukho mntu uya kunika inani elifanayo lokhuseleko elifumaneka apha kwi-GamePron. Ukukopela kwethu akubonakali ukuqinisekisa ukhuseleko lwabasebenzisi bethu.
Yiba yinkosi yeMfazwe yanamhlanje! Fumana ukufikelela ngoku.
Ilindelwe Lawula kunye COD MW Intel kugula yethu?